खुल्यो नयाँ रहस्य कन्चन र अनिशाको बिहेको फोटो खिच्ने दाई संग भेटियो यस्तो प्रमाण (भिडियो सहित ) – Enepali Samchar
खुल्यो नयाँ रहस्य कन्चन र अनिशाको बिहेको फोटो खिच्ने दाई संग भेटियो यस्तो प्रमाण (भिडियो सहित )
March 10, 2021 adminLeaveaComment on खुल्यो नयाँ रहस्य कन्चन र अनिशाको बिहेको फोटो खिच्ने दाई संग भेटियो यस्तो प्रमाण (भिडियो सहित )
e nepalisamchaar /काठमाडौ । अस्पतालमा दुई महिना भन्दा बढी उपचारको लागि अस्पताल बसाई पछि अस्ताएका कञ्चनको मंगलवार अन्त्यष्टि भएको छ । आइतवार निधन भएका कञ्चनको शव उनको श्रीमती भनिएकी युवतीको घरमा लगेर आफन्तले राखेका थिए । अनिशाले कञ्चनको श्रीमती भएर हिन्दु धर्म अनुसार मान्नुपर्ने परम्परा पुरा गर्नुपर्ने माग कञ्चनको परिवारको थियो ।
सोही माग लिएर उनीहरु यति धेरै दिन देखि अनिशाको घर अगाडी आन्दोलन गर्न पुगेका थिए । तर कञ्चनको शव धेरै दिन बाहिर राख्दा विग्रन थालेपछि प्रहरीको रोहवरमा भएको सहमति अनुसार शव उठाइएको हो । मंगलवार देवघाटमा कञ्चनको अन्त्यष्टि गर्ने सहमति अनुशार अनिशाको घरवाट शव उठाइएको हो । लामो समयसम्म छोराको उपचारको लागि अस्पतालमा बसेकी आमा निधन पछि एक्लिएकी छन् ।
श्रीमानको सहयोग बिना एक्लै हुर्काएकी छोराको पनि साथ छुटेपछि कञ्चनको आमा एक्लिएकी हुन् । उनको बेहाल भएको छ । ६६ दिनको लामो बेहोसी जिन्दगीपछि कञ्चनले आइतबार अन्तिम सास फेरे । अस्पतालको आइसियुमा बोल्न र हेर्न नसक्ने अवस्थाका कञ्चनले बि ष पि ए का थिए । उनले अनिशा कुमालसँग प्रेम विावह गरेका थिए तर लगत्तै माइती पक्षको फरक ब्यवहारपछि उनले यस्तो कदम उठाएका थिए ।
पूर्वी चितवनका कञ्चन तिमल्सिना र अनिशा कुमालको प्रेम प्रसंगले २ महिना यता ठूलो चर्चा पायो । काठमाडौँमा विवाह गरेर चितवन गएपछि अनिशा आफ्नै घर फर्किइन् । त्यस पछि विग्रिएको सम्बन्धले कञ्चनको इहलिला नै समाप्त गरिदियो ।
अहिले कन्चन को मृत्यु भैसकेपछी अनिशा र कन्चंको बिहेको फोटो खिच्ने घर नजिकैको दाईले गरे यस्तो खुलासा, सबैले भन्छन कि कन्चनले भगाएर ल्याएको हो तर होइन अनिसको आमा बाबुले आफुले रोजेको केटा संग बिहे गर्न लाग्दा अनिसाकै कारण कन्चनले अनिशालाई भगाएर लगेको हो भन्ने समेत दाबी गरेका छन् । अरु उनले के – के भने ? भिडियो हेर्नुहोस्
हतियार खोई भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेपछि बोल्यो विप्लवको पार्टी, दियो सबैलाई चकित पार्ने गरि यस्तो जवाफ !
यस कारण माओवादीले केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने, यस्तो छ खास रहस्य !
विदेश गएको १० महिनामै श्रीमती जेलमा लेखिन यस्तो भावुक पत्र ‘जसरि भएपनि निकाल्नुस बुढा होइन भने यो चिठिनै अन्तिम ‘ (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
विप्लवको दुई वाक्यको विज्ञप्तिले अल्मलियो सरकार
अनलाइन कक्षाको लागि अति उपयोगी हुन सक्छन् यी फोनहरु …..पुरा हेर्नुहोस्